Hertz: mpiara-miombon'antoka vaovao ao Vietnam
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Hertz: mpiara-miombon'antoka vaovao ao Vietnam
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • fampiasam-bola • Vaovao • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao Mafana Vietnam
Aogositra 29, 2019
Hertz Asia dia nanambara ny fanendrena ny New City Rent A Car ho mpiara-miombon antoka aminy vaovao ao i Vietnam.
Amin'ny maha-manam-pahaizana momba ny fanofana fiara eo an-toerana azy, New City Rent A Car dia hanolotra vahaolana marobe fitaterana ho an'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny Hertz sy ireo marika marika Dollar sy Thrifty hafa.
Ny marika rehetra dia ho hita ao Ho Chi Minh City, miaraka amin'ny Hanoi fandefasana amin'ny faran'ity taona ity. Ireo mpanjifa mitady trano fanofana fiara maharitra sy maharitra any i Vietnam handray soa izao avy amin'ny SUV lafo vidy, sedan ary serivisy fanofana fiara, toy ny serivisy Hertz Chauffer Drive, serivisy mpamily matihanina isam-baravarana, mety amin'ny famindrana seranam-piaramanidina sy tanàna, antsasak'adiny na fanompoana tontolo andro.
Samy mitombo hatrany ny tsena fandraharahana sy ny fialam-boly i Vietnam. Orinasa vaovao maherin'ny 130,000 no natomboka tamin'ny taona 2018, ka nahatratra 700,000 ny fitambaran'ny firenena *. Ankoatr'izay, ny firenena dia manantena ny handray mpizahatany hatramin'ny 20 tapitrisa amin'ny taona 2020, fiakarana 33% manomboka amin'ny 2018 *.
Eoin MacNeill, Filoha lefitra ho an'ny Asia Pacific faritra, dia nilaza hoe: “Faly izahay mandray ny New City Rent A Car ho an'ny fianakavian'i Hertz. Hertz dia manolo-tena hanolotra i Vietnam ny serivisy fanofana fiara manara-penitra izay efa fantatry ny tany eran-tany, mahafaly ny andrasan'ny mpivahiny sy ny mpizahatany. New City Rent A Car, miaraka amin'ny fahalalany sarobidy ny kolontsaina Vietnamianina sy ny indostria dia hanampy antsika hanatanteraka an'io fanoloran-tena io amin'ny alàlan'ny safidin'ny Hertz, Dollar ary Thrifty isan-karazany. ”
nim Vuon Phu, Mpitondra ny New City Rent A Car, nanampy hoe: “Faly tokoa izahay manomboka miasa Hertz, Dolara ary Thrifty amin'ity tsena miroborobo ity, manompo ny mpanjifa eo an-toerana sy iraisam-pirenena samy manana ny filany sy ny safidiny. Ho fanampin'ireo safidinay isan-karazany amin'ny fanofana fiara, ny serivisy toa ny Hertz Chauffer Drive dia hanampy anay hanompo ireo vondrom-piarahamoninay mitombo ary koa ireo mpandeha iraisampirenena izay tsy te hitondra fiara intsony. ”
Raha te hamaky vaovao momba ny dia momba an'i Vietnam Eto.